Erayada Daruuriga ah: Suuqgeynta Caalamiga ah ee Abuurista Baahida iyo Kordhinta Kobaca | Martech Zone
Si ay shirkaduhu u abuur dalab isla markaana u koraan adduunka, waxay u baahan yihiin inay ku hadlaan 12 luqadood si ay ula xiriiraan 80% ee dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah. Maaddaama in ka badan 50% dakhliga shirkadaha Mareykanka ay ka imaanayaan macaamiisha adduunka, $ 39 + bilyan oo ah waxyaabaha ka kooban # dejinta iyo warshadaha tarjumaadda ayaa muhiim u ah wadista ka-qaybgalka macaamiisha suuqyada adduunka. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha u baahan inay si dhakhso leh u turjumaan alaabtooda suuq-geynta iyo inay u ballaadhiyaan caalamka waxay la kulmeen caqabad weyn: hanaankooda hadda jira ee deegaanka ayaa ah mid gacmeed, waqti qaadanaya, aan waxtar lahayn, oo ay adag tahay in la miisaamo.
Farqiga u Dhexeeya Caalamka
Suuqleydu waxay abuuraan tiro ballaaran oo suuq-geyn iyo nuxur iib ah ah otomatiga suuq-geynta, suuq-geynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo nidaamyada Web CMS ee ay adeegsadaan si ay u gaarsiiyaan waaya-aragnimo shaqsiyeed iyo ololeyaal lagu bartilmaameedsanayo dhagaystayaasha. Si loo gaaro dhagaystayaasha luuqado badan ku hadla adduunka, dhammaan waxyaabahaas waxay u baahan tahay in laga dhigo suuqyada gobolka. Si kastaba ha noqotee, bixiyeyaasha adeegga tarjumaadda ma adeegsadaan nidaamyadaas, taas oo keenta hab-u-dejin aan habboonayn Si loo buuxiyo jadwalka-u-gogol-suuq, suuqleyda waa inay sameeyaan tarjumaad ganacsi: Waqtiga iyo xakameynta miisaaniyadda darteed, waxay awoodaan oo keliya inay u turjumaan qaar ka mid ah hantida suuqyada qaarkood, iyagoo uga tegaya fursadaha dakhliga miiska.
Erayada daruuraha ayaa xaliya farqiga u dhexeeya adduunka.
Cloudwords waa suuqgeyn caalami ah. Maaddaama Global Go-to-Market Hub, Cloudwords ay otomaatig ka dhigayso aagagga shaqada ee dhammaan waxyaabaha ku jira shirkadda si ay uga caawiso shirkadaha inay billaabaan ololeyaal luqado badan oo caalami ah 3-4 jeer ka dhakhso badan iyo ugu yaraan 30% qiimaha. Richard Harpham, Agaasimaha Guud ee Cloudwords
Shirkad tikniyoolajiyad run ah oo laga soo dhisay dhulka, Cloudwords waa tii ugu horreysay ee daruur ku saleysan, tarjumaadda otomaatiga tarjumadda ee loogu talagalay in lagu daboolo baahida macaamilka. Cloudwords waxay u fidisaa is-dhex-dhexaad aan kala go 'lahayn in ka badan 20 otomaatiga suuq-geynta hor-u-marinta warshadaha, maaraynta maareynta, iyo nidaamyada Web CMS. Kuwaas waxaa ka mid ah Marketo, Adobe, Oracle, HubSpot, WordPress iyo Drupal, dardargelinta suuqgeynta caalamiga ah ee heerka, kordhinta ROI ee dadaallada caalamiga ah ee shirkadaha, iyo si aad ah u kordhiya dalabka iyo dakhliga.
Cloudwords Astaamaha Muhiimka ah
Falanqaynta iyo Warbixinta-waqtiga dhabta ah: Lasoco kharashka, falanqee waxtarka habraaca, iyo cabir tayada iyo ROI heer caalami iyo heer gobol waqtiga dhabta ah.
Maareynta Ololaha Caalamiga ah: In si wada jir ah loo qorsheeyo loona fuliyo ololeyaasha caalamiga, kuwa gobolka, iyo kuwa maxalliga ah si xeeladaysan oo dhaqso leh qeybaha, qeybaha ganacsiga, iyo juqraafi ahaan. Abuur mashruucyo tarjumaad ah kuna raadso horumarka dashboodyada awoodda badan. Midaynta kooxaha kala firdhisan adoo ka dhigaya bartamaha isgaarsiinta iyo wada shaqeynta, oo hel digniino otomaatig ah iyo ogeysiisyo.
Erayada Cloud OneReview: Dib-u-eegista wada-shaqeynta dhinaca dib-u-eegista iyo aaladda tafatirka, awoodaha tikniyoolajiyadeed ee OneReview ayaa ka dhigaya habka ugu fudud ee dib loogu eegi karo loona tafatiri karo waxyaabaha la tarjumay
Cloudwords One TM: Keydka Xusuusta Xusuusta ee xaruntiisu martigeliso ayaa kaydiya ereyada iyo weedha horey loo tarjumay ee shirkadda isla markaana lagu cusboonaysiiyaa kaydka xogta. Turjumaanadaadu waxay marin u heli karaan shirkadaada OneTM, oo waqti iyo lacagba ku keydin doona qarashyada tarjumaada, iyo sii wadida fariimaha calaamaduhu kuwo iswaafaqsan suuqyo badan iyo luqado badan.
Cloudwords Sheekooyinka Guusha Macaamiisha
Cloudwords waa lamaane lama huraan u ah geeddi-socodka dejinta shirkadda Fortune 500 iyo shirkadaha Global 2000 ee adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan CA Technologies, Palo Alto Networks, Hach, McDonald's, Siemens, Marketo, Iron Mountain, Fitbit, Patagonia, iyo Blackboard.
Cloudwords waxay xallisaa baahida muhiimka ah ee macaamiil kasta oo suuq geynaya heer caalami ah. Richard Harpham, Agaasimaha Guud ee Cloudwords
Cloudwords waxay ku dhigeysaa Marketo xakameynta shabakadaha caalamiga ah
Qalabka suuqgeynta suuqgeynta Marketo ayaa tusaale weyn u ah macaamiisha Cloudwords oo u gudbineysa degello degello loogu talagalay dhagaystayaasha caalamiga ah ee gobollada bartilmaameedka ah. Kooxda Marketo waxay awoodeen inay xawaareyaan waqtiyada soo noqoshada ee ku saabsan waxyaabaha ku jira maxalliga ah sidaa darteed goobahooda caalamiga ah waa la cusbooneysiiyay isla waqtigaas ama maalmo gudahood goobta Mareykanka, toddobaadyo ama bilo ka dib. Akhriso daraasada kiiska oo dhameystiran.
Shabakadaha Palo Alto Waxay Gaaraan Dhageystayaasha Caalamka Degdeg leh Cloudwords
Shabakadda iyo shirkadda amniga ee shirkadda Palo Alto Networks ma aysan tarjumin ku dhowaad inta ugu badan ee ay u baahan tahay si ay ula socoto baahidooda gobolka maxaa yeelay waxay lahaayeen hanaan dejin oo ah shaqo xoog leh, kharash badanna ku qaadata. Cloudwords waxay u oggolaaneysaa kooxda inay si fudud u maamusho mashaariicda deegaanka, iyo isdhexgalka otomaatiga ah ee u dhexeeya Maareeyaha Khibradda Adobe iyo Cloudwords wuxuu xawaareeyaa waqtiga tarjumaadda, iyaga oo awood u siinaya inay abuuraan oo ay keenaan ololeyaal badan oo maxalli ah, si isdaba joog ah, si loo wado baahida iyo dakhliga adduunka oo dhan. Akhri daraasadda oo dhammaystiran.
Baro ereyada daruuraha
Xarunteeduna tahay San Francisco, Cloudwords waxaa taageeray Storm Ventures iyo dariiqa xisaabinta daruuriga sida Marc Benioff, aasaasaha iibka iibka.com. Email discover@cloudwords.com ama booqasho www.cloudwords.com wixii macluumaad dheeraad ah, kuna biir wadahadalka adduunka ee Twitter @Cloudwords Inc iyo on Facebook.
Tags: adobeSabuuradCA Technologiesereyada daruurahadrupalcodkarnimosaxsanFaylasha Madal WadaagFitbitcaalamkafarqiga u dhexeeya adduunkaSuuqgeynta Caalamkaololeyaasha suuqgeynta adduunkaxashiishhubsashoIron MountaindegaankasuuqoMcDonald eeOraclePalo Alto NetworksPatagoniaSiemensdaraaseyntarjumaadaWordPress
Waa maxay sababta Snapchat ay u Kacaandeynayso Suuqgeynta Dijital ah
Newlytics: Hab cusub oo lagu fahmo suuqgeyntaada